नेपालीहरुको अस्ट्रेलियामा किन ओइरो लाग्यो त ? खुसि को खबर भिडियो सहित ! - Enepalese.com
वासिङटन डिसी 02:10
नेपालीहरुको अस्ट्रेलियामा किन ओइरो लाग्यो त ? खुसि को खबर भिडियो सहित !
इनेप्लिज २०७४ मंसिर २८ गते ११:४९ मा प्रकाशित
नमस्ते! यहाँ हरुलाई स्वागत छ। म शिव न्यौपाने, मेलवर्न अष्ट्रेलियाबाट। मेरा दुई चार कुराहरु यहाँहरु माझ पस्कदैछु। मैले हजुरहरु समक्ष राख्न खोजेको कुरा के हो भने! नेपाली विद्यार्थीहरु किन अष्ट्रेलिया आऊन खोज्छन् र आईरहेका छन् भन्ने सन्दर्भलाई लिएर म केही कुरा गर्न गईरहेको छु।बाँकी कुरा यो भिडियोमा हेर्नुहोला।।।
नेपालीहरुको अस्ट्रेलियामा किन ओइरो लाग्यो त ? लेखक शिव न्यौपानेले गरे अस्ट्रेलियन नेपाली समुदायको (X-Ray) उनको पुस्तक ‘इन द प्रोसुट अफ युटोपियन लाइफ इन अस्ट्रेलिया’ मार्फत (In the Pursuit of utopian life in Australia)